September 2019 - BaHuThuTaGabar
“သမီးလေးကို နို့တိုက်ချင်ပေမဲ့ သွေးတွေပဲ ထွက်လာနေတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ စေတနာအမှား”
“သမီးလေးကို နို့တိုက်ချင်ပေမဲ့ သွေးတွေပဲ ထွက်လာနေတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ စေတနာအမှား” ကလေးမွေးထားတာ လပိုင်းပဲရှိသေးတဲ့ နာမည်ကြီး ထိုင်းအမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဟာ သူမရဲ့သမီးလေးကို နို့တိုက်ဖို့ နို့ညှစ်စက်နဲ့ ညှစ်ရာမှာ နို့အစားသွေးတွေကြီးပဲ ထွက်လာလို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့ အကြောင်းကို လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ ppanward ဆိုတဲ့ အင်စတာဂရမ်အကောင့်မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။ […]
ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးမှ (၄)တန်းကျောင်းသူ (၃)ဦး၏ ခန္ဓာကိုယ်အား ကိုင်တွယ်နမ်းရှုံ့မှုဖြစ်ပွား
ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးမှ (၄)တန်းကျောင်းသူ (၃)ဦး၏ ခန္ဓာကိုယ်အား ကိုင်တွယ်နမ်းရှုံ့မှုဖြစ်ပွား မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် စဉ့်ကူးမြို့နယ် မင်းကြီးကုန်းကျေးရွာ မင်းကြီးကုန်း အ.မ.က ကျောင်းခန်းထဲတွင် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးအောင်ခင်မှ (၄)တန်းကျောင်းသူ မ—— အား ပါးနှင့် ပါးစပ်တို့အား နမ်းရှုံ့ခြင်း… ၎င်းဆရာကြီးမှပင် (၄)တန်းကျောင်းသူ ဒုတိယတစ်ဦးဖြစ်သူ […]
ဘဏ်ကိစ္စအပေါ် ပြည်သူများ မစိုးရိမ်ကြရန် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ မှာကြားထား
ဘဏ်ကိစ္စအပေါ် ပြည်သူများ မစိုးရိမ်ကြရန် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ မှာကြားထား စက်တင်ဘာ ၆ – လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့် ဘဏ်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူများအနေဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်မရှိစေရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က. မှာကြားပြောဆိုလိုက်ကြောင်း အုတ်တွင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ချိုချို ကပြောသည်။ ” နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မှာကြားချက်ကတော့ ဘဏ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ […]
တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် (၅)ခုတွင် မိုးကြီးပြီး လေပြင်းတိုက်မည့်အန္တရာယ် အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေ(ဦးထွန်းလွင်)
တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် (၅)ခုတွင် မိုးကြီးပြီး လေပြင်းတိုက်မည့်အန္တရာယ် အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေ(ဦးထွန်းလွင်) မြန်မာနိုင်ငံဒေသ အများအပြားတွင် နေရာကွက် မိုးကြီးခြင်းနှင့် လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း များ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် မိုးတိမ် တောင် အန္တရာယ်ရှိနေပြီး တိုိင်းဒေ သကြီးနှင့် ပြည်နယ်ငါးခုတွင် မိုးတိမ်တောင်အန္တရာယ် အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေသည်ဟု မိုးလေ၀သပညာ ရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က သတိ ပေးသည်။ […]
ရေဘေးသင့်ဒေသများအတွက် မွန်မြတ်စွာလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင် ထိပ်ထားသခင်
ရေဘေးသင့်ဒေသများအတွက် မွန်မြတ်စွာလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင် ထိပ်ထားသခင် အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ထိပ်ထားသခင် ဟာဆိုရင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအရာလေးတွေနဲ့ အများရယ်မောပျော်ရွှင်ပြီး သဘောကျနှစ်သက်အောင် တီတီတာတာ ပြောဆိုတတ်ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်အများရဲ့ ချစ်ခင်မှုများစွာကို ရရှိလာခဲတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းပြီး စကားတတ်လွန်းတဲ့ သမီးလေး ထိပ်ထားသခင်က အခုဆိုရင် ကြော်ငြာတွေနဲ့ […]
ပါးရိုက်ချင်အောင် ထပ်မေးရင် ပါးထပ်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ အကယ်ဒမီ ထက်ထက်မိုးဦး
ပါးရိုက်ချင်အောင် ထပ်မေးရင် ပါးထပ်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ အကယ်ဒမီ ထက်ထက်မိုးဦး ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ ရွှေစင် ရတနာရွှေဆိုင် ကြော်ငြာကနေတဆင့် ကလေးရော၊ လူကြီးပါ မကျန် တခဲနက် အားပေးခဲ့ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပါ။ တစ်ခေတ်တခါ က ကြော်ငြာဘုရင်မလေး လို့တောင် တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအရာလေးတွေက ပရိသတ်ကို အချစ်မလျှော့အောင် […]
ဆာကူရာဆေးရုံတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သေဆဲုးသည့်ကိတ်စ နစ်နာကြေး မြောက်မြားစွာ တောင်းဆို
ဆာကူရာဆေးရုံတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သေဆဲုးသည့်ကိတ်စ နစ်နာကြေး မြောက်မြားစွာ တောင်းဆို ဆာကူရာပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံကို သိန်းပေါင်း တစ်သောင်းခွဲ ရလိုမှု အတွက် ဦးသီဟကိုကို ဆိုသည့် အမျိုးသား တစ်ဦးက တရားစွဲသည့်အမှုတစ်ခု ရန်ကုန်တွင်ဖြစ်ပွားနေပါသည်။ အကြောင်းကတော့ ဦးသီဟကိုကို ရဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ကိုယ်ဝန်ကို ဆာကူရာ ပုဂ္ဂိလက ဆေးရုံမှာ […]
“ထမင်းပေါင်းအိုးနှင့်် အိမ်မှာ ဒန်ပေါက်ချက်နည်း”
အိမ်မှာပဲ ပေါင်းအိုးနဲ့ ဒန်ပေါက်ဘယ်လိုချက်မလဲ လိုိအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ ဒန်ပေါက်ဆန် ၊နို့စိမ်း ၊ထောပတ် (အပူပေးထားပါ) ၊ပဲစိမ်း ၊စပျစ်စေ့ခြောက် ၊သီဟိုစေ့ ၊သကြား ၊ဆား ၊ကြက်သားမှုန့် ဆီ ၊ကြက်သွန်ကြော် ၊ဒန်ပေါက်အရောင်ဆေးရည် ၊ဒန်ပေါက်မဆလာ (ဖာလာစေ့.နာနတ်ပွင့်.သစ်ဂျပိုးခေါက်..ကရဝေးရွက်.) ဒန်ပေါက်ဆန်ကို ရေဆေးပြီး နာရီဝက်ခန့်ရေစိမ်ထားပါ ရေနွေးအိုးကို အိုးကြီးကြီးနဲ့ […]
“တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း 05.9.2019 မှ 11.9.2019 အထိ”
05.9.2019 မှ 11.9.2019 အထိတစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်း စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူတွေ အတွက်ခံနိုင်ရည်ရှိပေမဲ့ မရင့်ကျက်တဲ့သူတွေကတော့ ဘယ် လောက် လုပ်လုပ်အသိအမှတ်ပြုမခံရတာမျိုးတွေ၊ ချီးကျူးမခံရတာမျိုးတွေကြောင့် စိတ်ပျက်နေမိတတ်ပါတယ်။ အလုပ်ခွင်မှာလဲ မိမိစေတနာထားပေမဲ့ မျက်နှာမရသလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ပြောင်း၊ အိုးပြောင်း၊ ရုံးခန်းပြောင်း ဆိုတာမျိုးတော့ ဒီကာလမှာမသင့်ပါဘူး။ မိသားစုဝင်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကြောင့် မိမိငွေထွက်ရတတ်ပါတယ်။ […]
(၁၃)နှစ်အရွယ် (၇)တန်းကျောင်းသူလေးကို ဆိုင်ကယ် တက္ကစီမောင်းသမားက အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား
(၁၃)နှစ်အရွယ် (၇)တန်းကျောင်းသူလေးကို ဆိုင်ကယ် တက္ကစီမောင်းသမားက အဓမ္မပြုကျင့် မိဘများ ကိုယ့်သားသမီးကို သတိထားစောင့်ရှောက်ကြပါ… ရင်းနှီးတယ်ဆိုပီး မယုံကြည်ကြပါနှင့် အဲဒီ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကပဲ ယုတ်မာတာ ပိုများပါတယ်…. ဒီပို့လေးကို ဖတ်မိတဲ့သူတိုင်းကလဲ မိန်းကလေးရှင် မိဘများသိအောင် ရှယ်ပေးကြပါ….. ကုသိုလ်ရပါတယ်… သိသွားတဲ့ အခါ … ကြောက်ပီး ကိုယ်နဲ့မကွာ […]